Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Annie Zaman · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2017 16:33 GMT
Teo anilan'ny fivoarako sy ny fahasambarako tamin'ny asa an-gazety, ny dia teo anilako mandrakariva ny fianakaviana GV. Tamin'ny 2014, raha niteraka an'i Mimi, zanako voalohany aho, nandalo ny vanim-potoana manaraka ny fiterahana aho (postpartum), ary minoa ahy ianareo, nanampy ahy ianareo rehetra … tamin'ireo imailaka avy aminareo izay betsaka, tao anatin'ny fandaharam-potoana feno dia feno, no latsaka tany anatin'ny sokajy “spams” na “imailaka tafahoatra tao anatin'ny boaty fandraisako hafatra”—izaho, nitazona ahy ho tsy tapaka fifandraisana tamin'ny tontolo ivelany sy hilamin-tsaina izany. Azoko antoka fa nitazona ny maro amintsika hilamin-tsaina sy ho olombelona tamin'ny fomba marobe samihafa izany, izay tsy misy teny mahalaza azy. Nandritra io fotoana io aho dia nandray anjara tato amin'ny GV toy ny mpanoratra ho an'i Azia Atsimo sy toy ny mpandika lahatsoratra ary mpiaraka mamoaka lahatsoratra miasa an-tsitrapo ho an'ny fiteny Ourdou. Nanam-bintana ihany koa aho nanatrika ny Vovonana GV 2015 tao Filipina niaraka tamin'ny zanako 10 volana. Hitako tany indray ireo izay efa tafahaona tamiko nandritry ny Vovonana GV 2012 tany Nairobi, ary dia nahazo namana marobe vaovao aho. Hafa tanteraka mihitsy izany mihaona mivantana amin'ny tsirairay izany, ary angovo miabo sy fitiavana no nentiko nody tany an-tranoko.
Ankehitriny aho miaraka miasa amin'ny Rory Peck Trust izay manohana ireo mpanao gazety miasa tena sy ny fianakaviany manerana izao tontolo izao. Ny fandaharanasa Azia no sahaniko ao. Satria ny ankamaroan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao anatin'io vondrom-piarahamonina io dia tsy miankina, mitondra traikefa sy fahafahana ho ahy hanampy ny vondrom-piarahamonina amin'ny fomba misy famoronana kokoa ny asako.
Misaotra amin'ny fanohananareo sy ny fitiavanareo! Azonareo atao ny mifandray amiko amin'ny annie.xaman@gmail.com. Ezahako ny hamaly haingana araka izay azoko atao.